क्रसकाल ट्रेकर- X4 एक अफ-रोड स्मार्टफोन | ग्याजेट समाचार
हामी यहाँ फेरि "रुगुइरिजाडो" उपकरणको साथ आएका छौं, त्यो हो कि ती मोबाइल उपकरणहरू मध्ये एक जुन हामीले यसलाई हालेका सबै कुराको सामना गर्न डिजाइन गरिएको हो। क्रसकल यो फर्म हो जुन यस क्षेत्रमा काम गर्दैछ र हामीले पहिले उनीहरूका केही स्मार्टफोनहरूको विश्लेषण गरेका छौं।
यस पटक हामीले विश्लेषण तालिकामा राख्यौं उसको अन्तिम विमोचन, क्रसकाल ट्रेकर-एक्स,, एक फोन जसमा एक्शन-क्याम समावेश छ ताकि तपाईं कुनै पनि परिस्थितिमा राम्रो मेमोरी राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई नयाँ क्रसकल ट्रेकर -१ of को सबै विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस् यस गहन परीक्षणको लागि धन्यवाद जहाँ हामी यसको सबै शक्ति र कमजोरीहरू देख्दछौं।
3 जडान र सेन्सर
4 क्यामेरा र मल्टिमेडिया अनुभव
5 स्वायत्तता र सम्पादकको विचार
हामी उपकरणको बाह्य उपस्थितिबाट सुरू गर्दछौं, यो कसरी अन्यथा हुन सक्छ यो असह्य, कडा र भारी महसुस गर्दछ। सुरक्षा र प्रतिरोधको स्तरमा पुग्न यो एकमात्र तरीका हो, अन्य सर्तहरूमा हासिल गर्न असम्भव। हामी २ fra० ग्राम भन्दा कमको वजनका लागि प्रमुख फ्रेमहरू र १ size२. x x x२ x १२. mm mm मिमीको कूल आकारको एक उपकरणको सामना गरिरहेका छौं। यदि तपाईले यसलाई आफ्नो जेबमा बोक्ने योजना बनाउनु भएको छ भने यो निश्चित रूपमा दिन प्रतिदिनको लागि उत्तम यात्रा साथी होइन। यद्यपि यो कुनै खास नकारात्मक बिन्दु बनेको छैन।
के तपाईंसँग पहिले नै यो स्पष्ट छ? यसलाई उत्तम मूल्यमा यो लिंकमा खरीद गर्नुहोस्!
साइज: 162,6 x 82 x 12,85 मिमी
यसको असंख्य बटनहरू र गैर पर्ची सामग्रीको साथ, हामी यसलाई स्लिपिंगको डर बिना र स्पष्ट रूपमा कुनै पनि प्रकारको सुरक्षात्मक केसिंग बिना प्रयोग गर्न सक्षम भएका छौं। फोन म्याट कालो रंगमा डिजाईन गरीएको छ जसले चेसिसमा फिंगरप्रिन्टहरू राम्रोसँग भगाउँदछ, तर अगाडिको गिलासमा होइन। दायाँपट्टि दुई बटनहरू, ती मध्ये एउटा फिंगरप्रिन्ट रिडर हो, राम्रोसँग अवस्थित छ। बाँया साइडका लागि दुई अन्य भोल्युम बटनहरू। निश्चित रूपले डिजाइन यो हो कि तपाइँ यी सुविधाहरूको साथ एक उपकरणबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसैले हामी यस दायरामा एक मानक फोन के हो भनेर सामना गरिरहेका छौं।
हामी मुटुमा जान्छौं, फेरि प्रोसेसरको मध्य दायरामा क्रसकल बेट क्वालकॉम, यस अवस्थामा स्नैपड्रैगन 660० यसले कम्पनीका अन्य उपकरणहरूलाई धेरै पछाडि छोडिन्छ। अन्तमा, फर्म बराबर सम्म प्रदर्शन गर्न प्रतिबद्ध छ, हामी बुझ्छौं कि क्यामेरामा तोकिएको सेन्सरहरूको आवश्यकताले बाध्य पार्दछ। हामी संग छ लूप र एड्रेनो 4१२ GPU बन्द गर्न GB जीबीको र्याम।
प्रोसेसर: क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660० अक्टा कोर २.२ गीगाहर्ट्ज
भण्डारण: GB 64 जीबी eMMC .5.1.१ (विस्तार योग्य माइक्रोएसडी 512१२ जीबी सम्म)
रियर: दोहरो १२ एमपीको सोनी IMX386 सेंसर र १ sens०º चौडा कोण
ब्याट्री: Quick,4.400०० एमएएच द्रुत चार्ज 3.0.० र एक्स-लिंक जडानको साथ
कनेक्टिविटी: USB-C, FM रेडियो, वाइफाइ NU-MIMO, ब्लुटुथ .5.0.०, GPS र NFC
यो एकदम पूर्ण हुनको लागि बाहिर खडा हुन्छ, हामी सायद केहि बढी उन्नत भण्डारण पनि हराउछौं, किनकि leMMC .5.1.१ मेमोरी एक राम्रो र्याम मेमोरी र एक अच्छा प्रोसेसर को प्रदर्शन को वजन गर्न सक्छ, यद्यपि हामीले दैनिक प्रयोगमा यसको कदर गरेनौं। मैले भर्खर भनें, समग्र प्रदर्शन एकदम राम्रो छ, वास्तवमा क्रसकाल दायरामा सब भन्दा राम्रो हामीले अहिलेसम्म परीक्षण गर्न सकेका छौं, तर उपकरणको मूल्य विचार गर्दा हामी थोरै आशा गर्न सक्दैनौं।
जडानको सर्तमा हामीसँग अहिले सम्मको क्रसकलको सब भन्दा कटि cutting् किनारा पनि छ, हामी शर्त लगाउँछौं NFC, वाइफाइ,, ब्लुटुथ .6.० र GPS। अवश्य पनि हामी केहि पनि मिस गर्ने छैनौं, एक USB-C पोर्ट पनि छ कि OTG क्षमता छ, यो एक भिडियो आउटपुट छैन भन्ने तथ्यको बावजुद। ट्रेकर-एक्स4सँग एक कार्य-क्याम छ भन्ने कुरा विचार गर्दा यो चाखलाग्दो हुने थियो। तर यो यो हो कि तिनीहरू मात्र सेन्सरहरू उपलब्ध छैनन्, हामीसँग धेरै छन्:
UV सेन्सर (पराबैंगनी रे)
अवश्य पनि, केहि उपकरणहरू तपाईंले सेन्सरहरूको सूचीको साथ बजारमा फेला पार्नुहुनेछ। यो निश्चित रूपले जोखिमपूर्ण खेल प्रदर्शन गर्ने वा प्रतिकूल परिस्थितिहरूको लागि हो, जसलाई यस प्रकारको जानकारी जुन क्रसकाल ट्रेकर-एक्स information प्राप्त गर्न सक्षम छ। हो, मैले एउटा इन्टरफेस छुटाएको छु जुन यो डेटालाई हल्का र राम्रो क्रमबद्ध ढ in्गले बेग्लाबेग्लै हुन्छ, यस पक्षमा अधिक पालिश गरिएको सफ्टवेयर, र यति सीमित छैन कि क्रसकलले यस उपकरणमा एन्ड्रोइड .8.1.१ को लागि चलाएको छ। ।
क्यामेरा र मल्टिमेडिया अनुभव
हामी पछाडि डबल सेन्सर सहित छौं। पहिलो १२ एमपीको सोनी एमआईएक्स 386 (12º कोf/ १.1.8) र अन्य १२ एमपीको सहयोगी तर १º०º सम्मको चौडा कोणको साथ, निस्सन्देह महान परिदृश्य कब्जा गर्न को लागी डिजाइन र सकेसम्म धेरै जानकारी। तिनीहरू रिजोलुसनमा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्षम छन्एन K के मा n० एफपीएस वा फुलएचडी सुस्त गति १२० एफपीएसमा। बाँकीका लागि हामीसँग मुख्य एकमा एक इलेक्ट्रोनिक स्टेबलाइजर र xx डिजिटल जूम छ।
क्रसकाल ट्रेकर-एक्स Buy खरीद गर्नुहोस् (ENLAC)
अगाडि केवल कुनै पनि "घमण्ड" बिना MP एमपीको। मानक फोटो शूट, धेरै प्रशोधन बिना र लिनको लागि सुखद।
यसको अंशको लागि हामीसँग एक छ .5,5..XNUMX इन्च आईपीएस प्यानल एक संकल्पको साथ 1920 X 1080, त्यसैले हामी थोरै FullHD भन्दा बढी। यसले कुल 401०१ पीपी प्रदान गर्दछ र यो कसरी हुन सक्दछ अन्यथा, यस स्क्रिनसँग क्रसकलमा अन्य सामान्य सुविधाहरू छन् जस्तै यो भिजेको बेला र ग्लोभहरू प्रयोग गर्दा सम्भावना जस्ता। हामीसँग एक औसत ध्वनी, र एक चमक छ जुन हामीलाई बाहिर समस्या बिना यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, तर त्यो कुनै पनि तरिकामा बाहिर देखिँदैन। प्यानल राम्रोसँग समायोजित गरिएको छ र राम्रो संतृप्त र अत्यधिक भिन्न रंग प्रदान गर्दछ।
हामीसँग एक ब्याट्री छ 4.400 mAh त्यो हामीलाई अनुमति दिन्छ 24W द्रुत चार्ज जसको चार्जर प्याकेजमा (वाटरप्रूफ IPX6 हेडफोनको साथ) सम्मिलित छ। यसले हामीलाई सामान्य प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, १२ देखि १ hours घण्टाको प्रयोगको लागि पर्याप्त चार्ज।
अन्तिम राय को रूपमा, हामी एक उपकरण को साथ सामना गर्नु पर्छ कि यो के यो प्रतिज्ञा को पूरा गर्छ तर कि यो मूल्य मा यो स्पष्ट पार्छ, जो यो अन्य ब्रांडहरु को उच्च-अन्त संग काँधहरु माल्छ। मूल्य एक कारण यो हो किन यो यति तार्किक लाग्दैन अपरेटिंग प्रणालीमा एन्ड्रोइड .8.1.१ मा शर्त लगाउन, यद्यपि सेन्सर र हार्डवेयरको कास्टले यसको लागि क्षतिपूर्ति दिन सक्दछ। तपाईं यसलाई अमेजनमा () 646) XNUMX XNUMX यूरोबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
सेन्सर र जडानको साथ लोड
यो मलाई उच्च मूल्य देखिन्छ
म Android Android.१ मा शर्त बुझ्दिन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » क्रसकाल ट्रेकर-एक्स an एक अफ-रोड स्मार्टफोन